Yantai Everbright Glass Co., Ltd.iri iri yakaisvonaka pamhenderekedzo guta Yantai - zhuji maindasitiri paki.
Yantai Everbright Glass Co., Ltd.iri iri yakaisvonaka pamhenderekedzo guta Yantai - zhuji maindasitiri paki. Iyo kambani yakaunza epamberi girazi yekugadzira michina kumba uye kunze kwenyika, ine yakaenzana maitiro ekugadzira uye vakuru vehunyanzvi manejimendi manejimendi vashandi, p ...
Nhanganyaya yegirazi rakaomarara
Girazi rakamisikidzwa nderokuchengetedza girazi. TOUGHENED girazi rudzi rwegirazi rakadzivirirwa, kuitira kuti uvandudze simba regirazi, kazhinji kushandisa makemikari kana epanyama nzira, kuumba kudzvinyirira kushushikana pamusoro pegirazi, girazi rinotakura rekunze simba rekutanga kudzora surfac ...
Zvakanakira Yantai girazi rakabatiswa
Simba Iko kushandiswa kweAnquan, huremo hwayo hwekutakura hwakawedzera kusimudzira hunhu husina kusimba, kunyangwe kana girazi rakadzikama risiri zvidimbu zvidiki, kukuvadzwa kwemuviri wemunhu kwakadzikira zvakanyanya. Kuramba kwegirazi rakabatidzwa kunokurumidza kutonhora kupisa kupisa pro ...
Zvivakwa zvegirazi rakadzikama
1.Kuchengeteka Kana girazi rakakuvara nesimba rekunze, marara anozoita zvidiki zvekutora senge uchi, izvo zvisiri nyore kukuvadza muviri wemunhu. 2.High kusimba Iko kunokanganisa simba regirazi rakadzikama eiyo imwe ukobvu iri 3 ~ ka5 iyo ...
Toughened girazi, rakati zvakare aggrandizement girazi, igirazi iro iro pamusoro rine compression kusagadzikana. Iyo yekugadzirira nzira yegirazi rakabatiswa ndeinotevera
Yakapfava girazi ndiyo girazi rakajairwa rakavharwa rekutanga rakatemwa muhukuru hunodiwa, ndokuzozochidzirwa kuti uswedere kunzvimbo inodzikisira yemadhigirii mazana manomwe, uyezve kutonhora nekukurumidza uye yunifomu (kazhinji 5-6mm girazi pamadhigiri 700 tembiricha yepamusoro heatin ...
Girazi Zvivakwa, Pamberi Girazi Rakatsemuka, Imba yekugezera Ine Girazi Shower Doors, Watercolor Girazi, 4mm Laminated Girazi, Makara Mirror Girazi,